ကော်ဖီမှုန့်စစ်စစ်ကိုအသားအရေနဲ့ဆံပင်ကောင်းဖို့အတွက် အသုံးပြုနည်းများ - Tameelay
အနံ့မွှေးမွှေးကော်ဖီတစ်ခွက်က သင့်ရဲ့မနက်ခင်းကိုလန်းဆန်းစေပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကော်ဖီမှုန့်စစ်စစ်က အလှအပအတွက်လည်း အတော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။ ကော်ဖီမှုန့်ကို အသားအရေနဲ့ဆံပင်အတွက်သုံးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကတော့ ….
(၁) ကော်ဖီမှုန့်နဲ့ ကြေးချွတ်နည်း
ကော်ဖီမှုန့်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်၊ သကြားညိုခွက်နဲ့တစ်ခွက်၊ သံလွင်ဆီသုံးဇွန်း၊ ပျားရည်နှစ်ဇွန်းကိုရောမွှေပြီး မျက်နှာအနှံ့ခပ်ထူထူလေးလိမ်းကာ လက်ချောင်းထိပ်လေးနဲ့ဖွဖွလေးနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ၁၀မိနစ်ခန့်နှိပ်နယ်ပြီးရင် ရေနွေးလေးနဲ့မျက်နှာသစ်ပေးလိုက်ပါ။ မျက်နှာအသားအရေပေါ်မှာတင်နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို လုံးဝပြောင်စင်သွားစေပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းခြောက်တာဟာ ရာသီမရွေးဖြစ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်ကိုအလှပျက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်သွေ့ကွဲအက်နေတဲ့နှုတ်ခမ်းကိုစိုပြေနူးညံ့စေဖို့ ကော်ဖီမှုန့်နဲ့သံလွင်ဆီကိုရောပြီး နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာလိမ်းကာ သွားပွတ်တံလေးနဲ့ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပါ။
Spa concept. Self care with coffee body scrub. Natural organic cosmetics, homemade product, alternative lifestyle. White putty background
ကော်ဖီမှုန့်ကိုခေါင်းလျှော်ရည်အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ ရေတစ်ခွက်ကိုအပူပေးကာ ကြက်သီးနွေးလောက်အနေအထားရအောင် အအေးခံပါ။ အဲ့ဒီရေထဲကို ကော်ဖီမှုန့် ၅ ဇွန်းထည့်ပြီး အမြှုပ်လေးတွေထလာတဲ့အထိရောမွှေပြီးရင် ခေါင်းလျှော်ရည်အဖြစ်သုံးနိုင်ပါပြီ။ ကော်ဖီမှုန့်နဲ့ခေါင်းလျှော်တာက ဆံပင်ကိုတောက်ပြောင်စေပြီး ဦးရေပြားကိုလည်းကျန်းမာစေပါတယ်။
ကော်ဖီမှုန့်ကိုရေနွေးနဲ့ဖျော်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ၁၀မိနစ်လောက်အအေးခံလိုက်ပါ။ အာလူးကိုအကွင်းလေးတွေလှီးပြီး အအေးခံထားတဲ့ကော်ဖီထဲမှာနစ်လိုက်ကာ မျက်ကွင်းညိုနေတဲ့အပေါ်မှာ ကပ်ထားပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ကပ်ပြီးတာနဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာတွေ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အနံ့မှေးမှေးကျောဖီတဈခှကျက သငျ့ရဲ့မနကျခငျးကိုလနျးဆနျးစပွေီး အလုပျလုပျတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုကျမှုကောငျးမှနျစပေါတယျ။ ဒါတငျပဲလားဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ကျောဖီမှုနျ့စဈစဈက အလှအပအတှကျလညျး အတျောလေးအသုံးဝငျပါတယျ။ ကျောဖီမှုနျ့ကို အသားအရနေဲ့ဆံပငျအတှကျသုံးနိုငျမယျ့နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေတော့ ….
(၁) ကျောဖီမှုနျ့နဲ့ ကွေးခြှတျနညျး
ကျောဖီမှုနျ့ခှကျနဲ့တဈခှကျ၊ သကွားညိုခှကျနဲ့တဈခှကျ၊ သံလှငျဆီသုံးဇှနျး၊ ပြားရညျနှဈဇှနျးကိုရောမှပွေီး မကျြနှာအနှံ့ခပျထူထူလေးလိမျးကာ လကျခြောငျးထိပျလေးနဲ့ဖှဖှလေးနှိပျနယျပေးပါ။ ၁၀မိနဈခနျ့နှိပျနယျပွီးရငျ ရနှေေးလေးနဲ့မကျြနှာသဈပေးလိုကျပါ။ မကျြနှာအသားအရပေျေါမှာတငျနတေဲ့ အညဈအကွေးတှကေို လုံးဝပွောငျစငျသှားစပေါတယျ။
နှုတျခမျးခွောကျတာဟာ ရာသီမရှေးဖွဈတတျတဲ့အရာတဈခုဖွဈပွီး သငျ့ကိုအလှပကျြစတေဲ့အကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ခွောကျသှကှေဲ့အကျနတေဲ့နှုတျခမျးကိုစိုပွနေူးညံ့စဖေို့ ကျောဖီမှုနျ့နဲ့သံလှငျဆီကိုရောပွီး နှုတျခမျးပျေါမှာလိမျးကာ သှားပှတျတံလေးနဲ့ပှတျတိုကျပေးလိုကျပါ။
ကျောဖီမှုနျ့ကိုခေါငျးလြှျောရညျအနနေဲ့လညျးသုံးလို့ရပါတယျ။ ရတေဈခှကျကိုအပူပေးကာ ကွကျသီးနှေးလောကျအနအေထားရအောငျ အအေးခံပါ။ အဲ့ဒီရထေဲကို ကျောဖီမှုနျ့ ၅ ဇှနျးထညျ့ပွီး အမွှုပျလေးတှထေလာတဲ့အထိရောမှပွေီးရငျ ခေါငျးလြှျောရညျအဖွဈသုံးနိုငျပါပွီ။ ကျောဖီမှုနျ့နဲ့ခေါငျးလြှျောတာက ဆံပငျကိုတောကျပွောငျစပွေီး ဦးရပွေားကိုလညျးကနျြးမာစပေါတယျ။
ကျောဖီမှုနျ့ကိုရနှေေးနဲ့ဖြျောပွီး ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ၁၀မိနဈလောကျအအေးခံလိုကျပါ။ အာလူးကိုအကှငျးလေးတှလှေီးပွီး အအေးခံထားတဲ့ကျောဖီထဲမှာနဈလိုကျကာ မကျြကှငျးညိုနတေဲ့အပျေါမှာ ကပျထားပေးပါ။ ၁၅ မိနဈလောကျကပျပွီးတာနဲ့ မကျြကှငျးညိုတာတှေ ပြောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
သင့်ချစ်သူဟာ သူ့အဆက်ဟောင်းကိုအခုချိန်ထိမမေ့နိုင်သေးဘူးဆိုတာ သိသာနေတဲ့အချက်များ